ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबुलाई कोरोना पुष्टि
एसिडको जलनमा कानुनी मलमः पीडितको निःशूल्क उपचार, बिक्री गर्न लाइसेन्स चाहिने
प्रयोग भइसकेका ३ लाख बढी कन्डम बेच्न राखिएको अवस्थामा बरामद
धरानका सन्तोषले १ महिनाअघि विहे गरेको श्रीमतीको अर्को श्रीमान र बच्चा भएको थाहा पाए पछि…..
ठूलो जनमत हुँदा पनि जीवनहीन नेकपा र सरकार !
काठमाडौं – बलिउड अभिनेत्री काजोलको आज जन्मदिन परेको छ । ५ अगस्ट अर्थात आज उनले आफ्नो ४६ औं जन्मदिन मनाउदैछिन् । उनको जन्मदिनमा बिहानैदेखी शुभकामनाको ओइरो लागेको छ ।
उनका श्रीमान् तथा अभिनेता अजय देवगनले पनि सामाजिक सञ्जालमा तस्विर शेर गर्दै जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । सानैदेखी अभिनय गर्न रुचाउने काजोलले १६ बर्षको उमेर देखी नै फिल्ममा खेल्न शुरु गरेकी थिइन् । उनले फिल्म ‘बेखुदी’ बाट बलिउडमा प्रबेश गरेकी हुन् ।
पछिल्लो समय फिल्ममा खासै नदेखिए पनि उनले हालसम्म धेरै फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् । फिल्म खेल्ने क्रममा काजोल र शाहरुख खानको जोडी धेरैले रुचाएका थिए । तर पछि काजोलले अजयसँग विवाह गरिन् ।
अजय र काजोलको रोचक ‘लव स्टोरी’: घरमै गरेका थिए लुकीछिपी विवाह
बलिउड अभिनेता अजय देवगन र उनकी पत्नी काजोलको ‘लव स्टोरी’ निकै रोचक छ । उनीहरु वैवाहिक जीवनमा बाधिँएका १९ वर्ष पूरा भएको छ । १९ वर्षे वैवाहिक जीवनकालमा काजोल र अजयले जीवनमा थुप्रै फिल्ममा काम गरे र दर्शकको दिल र दिमागमा रहेका छन् ।
यसैबीच, अगस्ट ५ मा जन्मदिन मनाइरहेकी काजोलको अजयसँगको प्रेम निकै रोचक छ ।
विवाहपछिका दिनहरुमा वैवाहिक सम्बन्ध बन्दै र बिग्रदै गर्ने बलिउडको दुनियाँमा उनीहरुको जोडी एक उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । विवाहको सुरुका दिनहरुमा अजय बलिउडका भर्खर भर्खर पाइला सार्दै थिए भने काजोल उचाईमा पुगिकेकी थिइन् ।
भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तर्वातामा काजोलले किन अजय देवगनसँग विवाह गर्ने निर्णय लिएकी थिइन् भनेर खुलासा गरेकी थिइन् ।
कंगनासँगको अफयेरका कारण धरापमा परेको थियो अजय र काजोलको सम्बन्ध
छोटोछोटो समयमा छिटोछिटो प्रेमसम्बन्ध भत्किरहने वर्तमान समयमा अजय देवगन र काजोलको प्रेमपूर्ण यात्राले दुई दशक काटिसेकेको छ ।
उनीहरूलाई बलिउडको आदर्श जोडीका रूपमा लिइन्छ।
उनीहरूबिचको प्रेम पहिलो नजरको प्रेम थिएन।
पहिलो पटक भेट्दा उनीहरूको मन अन्त कतै जोडिएको थियो।
समयले उनीहरूको प्रेम छुटायो र उनीहरू नजिक बने।
उनीहरूहरू बिच पहिले भेट सन् १९९५ मा ‘हलचल’ सिनेमाको सेटमा भएको थियो।
त्यो भेट खासै फलदायी भएन।
उनीहरूले साथमा काम गरे।
त्यतिबेला उनीहरूबिच एकअर्कालाई जोड्ने तार दुबैले भेटेनन्।
दुबैको स्वभाव फरक(फरक थियो।
दुबैको स्वभाव हेर्दा कुनै दिन यी दुबै प्रेममा हुनेछन् र बिबाह पनि गर्नेछन् भनेर कसैले सोचेका थिएनन्।
अरूको त कुरै छोडौं स्वयं अजय र काजोलले पनि सोचेका थिएनन्।
कारण काजोल ‘हा हो गर्ने, घमण्डी र एकदमै बोलीरहने व्यक्ति’ थिइन्।
काजोलको यो बानीले अजयलाई काजोल फेरी भेटनुपर्ने मान्छे जस्तो लागेन।
अजयका बारेमा काजोलको सोचाइ पनि करिबकरिब त्यस्तै थियो।
काजोलको नजरमा अजय ‘अर्कै र गवाँर’ किसिमका थिए। अजयमा उनले कुनै त्यस्तो आकर्षण भेटिनन्।
त्यतिबेला त्यस्तो मरिहत्ते गर्ने कुनै कारण नभेटे पनि काजोललाई सिनेमाको एक दृश्य गर्दा भने अजयले कुनै दिन उनको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछन् भन्नेचाँहि हल्का महशुस गरेकी थिइन्।
तर तपाईलाई थाहा छ यो आदर्श जोडीको सम्बन्ध टु-ट्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
कारण थिइन् कंगना रनावत ।
कंगना र अजय एउटा फिल्मको सुटिङको समयमा नजिक भएका थिए ।
पछि उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको हल्ला चल्न थाल्यो ।
कंगनाले बिहेको लागि प्रे-शर दिन थालिन् ।
अजयले घरमा समय दिन छाडे ।
उनीहरुको बीचमा झग-डा शुरु भयो ।
अन्त्यमा काजोलले २ बच्चा लिएर घर छाडेर जाने ध-म्की दिइन् र अजय बिस्तारै कंगनाबाट टाढा भए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधबार, साउन २१, २०७७ १२:४६:२६
यी हुन् महेश भट्टका चर्चित काण्ड, जस्ले बलिउड हल्लायो !
४० वर्षकी भइन् करिना कपुर, अंकलसँग गरिन् बिहे !
भोलिदेखी आन्तरिक उडान खुल्ने, कुन स्थानको भाडाको कति ? (तालिकासहित)
धेरै रिसाउने हुनाले यी ३ राशिको प्रेम सम्बन्ध टिक्दैन..
रियाको बयानले हल्लिएको बलिउड : दुनियाँ चकित हुने गरी भएका पार्टीका तस्विरहरु
कंगनाको अपिस बनाउन अम्बानीले २ सय करोड दिने हल्ला मात्र
लहरो तान्दा पहरो गयो : रियासँगै यी २५ सेलिबेटी पनि फन्दामा पर्ने संकेत
आज शुक्रबार माता सन्तोषीको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस ।
चर्चित जोडी निश्चल र स्वस्तिमाले सुरु गरे अर्को यस्तो नयाँ काम
रणवीर सिंहको निवेदन : ‘दीपिका कहिलेकाँही डराउँछिन्, सोधपुछमा मलाई सँगै बस्न दिइयोस्’
सुशान्तको निधनपछि कलाकारको भागाभाग ! यो जोडी पनि पर्यो फन्दामा
यी कलाकार जस्को सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकेन !
दिशा पटानी र शाहिद कपूरको रोमान्स, जित्ला त दर्शकको मन ?
बलिउडमा शोक : अभिनेता भुपेशको निधन
अमृतपानको लोभले निम्तिएको विष बमन
बिहिबार, असोज १, २०७७
कुलमान घिसिङ लाई प्राधिकरण प्रमुखमा पुन नियुक्ति गरिनु हुदैन !
मानव जीवनको अस्तित्व र उदेश्य …
डा. केसीको ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ र कुलमानका ‘पाखे’ समर्थक
डा. रूपक भन्नुहुन्छ सुगरका बिरामीले बेग्लै खाना खानु जरुरी छैन, स्वास्थ मुलक जानकारी अवश्य पढ्नुहोस
शिल्पामाथि आइलाग्यो ठूलो आपत !
मनोरञ्जन :रेगन कार्की